« Ilay écran géant…! » -
AccueilTresaka« Ilay écran géant…! »
03/01/2019 admintriatra Tresaka 0
Noho ny fisian’ilay fahitalavitra lehibe nokasain’ny KMMR namoahana ny marina rehetra momba ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa no nahatonga ny Préfet n’Antananarivo nanao izay fomba rehetra nentina nanakanana ireo vahoaka tsy niditra ny kianjan’ny 13 Mai omaly. Nilaza mantsy ny Préfet fa azo natao ny hetsika raha tsy nasiana io « écran géant » io teo amin’ny Parvis teny amin’ny manoloana ny lapan’ny tanàna.
Tena azo lazaina fa hevitra taingina sy fialàna bala amin’ny fomba maivana dia maivana mihitsy ny an’ity Préfet eto Antananarivo ity, ary toa manao tsinontsinona ny maha manam-pahefana azy. Tsy olona notendrena amina toerana ambony toa ireny tokoa mantsy no manao fialan’ny tsy ampy fahalalàna toa izany. Na efa mahazatra ireto manam-pahefana eto amintsika mihitsy no mihevitra ny vahoaka ho bado sy vendrana, ka azo hamoronana izao lainga marivo tototra rehetra izao dia hanaiky be fahatany fotsiny.
Mbola tsy nahitana na andalanan-dalàna iray aza milaza fa tsy azo asiana “écran géant” teny amin’ny lapan’ny tanàna. Manerana ny kihon-dalana rehetra teto an-drenivohitra aza nasiana azy ireny rehefa nisy ireo hetsika ara-panatanjahantena goavana teto amin’ny firenena, na teo amin’ny sehatra Afikana izany, na teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Ny mahagaga dia tsy nisy fanakanana avy amin’ny Préfet ireny fa nandeha baranahany fotsiny. Tamin’ity indray nitoraka ity anefa dia nolazainy fa anton’ny fanakanana ilay hetsika.
Mazava izao fa izay teny tonga tao an-tsain’ity tompon’andraikitra ity ihany no nolazainy rehefa nametrahana fanontaniana ny tenany. Tsy nahagaga araka izany raha toa ka nilaza zavatra hafa indray ny tenany taorian’izay, ary nilaza fa tsy azo notanterahina mihitsy ilay hetsika, na tsy nisy “ écran géant” aza. Lasa ihany ny saina hoe olona tsy manana fanapahan-kevitra matotra toa izany ve no omena andraikitra ambony eto amin’ny firenena?
Azo antoka aloha fa noho ny resaka politika no anton’izao hevi-dravina izao e. Ny olom-boatendry eto Madagasikara mantsy matetika dia misy hifandraisany amin’ny resaka antoko, na namanamana, na politika hatrany, ary sarotra ny mampisaraka azy ireo. Izany no antony mahatonga ny gaboraraka sy ny baranahany eto amin’ny firenena, ary ny tena loza dia tsy mahefa na inona na inona matetika ireny olom-boatendry noho ny politika ireny rehefa ilay tena ny asany no hampanaovina azy.
Anton’ny fitakian’ireo kandidà ny fanatsarana ny zotram-pifidianana, ary hanatanterahana ilay « Conférence souveraine » handraisana fanapahan-kevitra. Tapak’ireo kandidà ny sabotsy teo fa hotanterahina amin’ny alakamisy ho avy izao, io fivoriana hanapahana hevitra io. Mpandray anjara ...Tohiny